मेक्सिकोमा ८ रेक्टरको भूकम्प, सन् १९८५ यताकै शक्तिशाली
भाद्र २३ २०७४ एजेन्सी
एजेन्सी | मेक्सिकोमा ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। दक्षिणी मेक्सिकोमा उक्त रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको यूएस जियोलोजिकल सर्भेले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का मेक्सिकोको राजधानीलाई पनि हल्लाएको बताइएको छ। भूकम्पका कारण मान्छेहरु सडकमा आएको रोयटर्सले लेखेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पिजिजियापान सहरको १ सय २३ दक्षिणपश्चिममा रहेको बताइएको छ। भूकम्प ज...
प्रेमका लागि जापानी राजकुमारीले त्यागिन शाही पद
भाद्र २० २०७४ बीबीसी
काठमाडौं, भदौ २० । भनिन्छ ‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ । यो भनाईलाई जापानकी राजकुमारी माकोले पुष्टि गरेकी छन् । उनले आफ्नो प्रेम प्राप्तीका लागि शाही पद र दरबार त्यागेकी छन् । सामान्य परिवारका एक युवासँग गहिरो प्रेममा रहेको खुलासा ५ महिनाअघि नै भएपनि जापानी राजकुमारी माकोले शाही पद त्यागेर इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । ती सामान्य युवा हुन् कोमुरो । उनसँ...
जुकरबर्गलाई किन फेसबुकमा ब्लक गर्न किन सकिँदैन ?
भाद्र १९ २०७४ .
भदौ १९ । फेसबुकका जन्मदाता मार्क जुकरबर्ग र उनकी पत्नी प्रिसिला चानको फेसबुक प्रोफाइल निकै विशेष छ । हामीले फेसबुकमा जो कोहीको फेसबुक अकाउन्ट ब्लक गर्न सक्छौं । तर, तपाईंलाई थाहा छ ? यी दुईलाई फेसबुकमा ब्लक गर्नै सकिँदैन । आखिर आफ्नै हात जगन्नाथ भन्ने उखान जुकरबर्गको मामिलामा पनि लागू भएर होला । आफ्नै कम्पनी फेसबुकमा आफुलाई नै ब्लक गर्न मि...
दक्षिण कोरियाले पनि गर्‍यो क्षेप्यास्त्र अभ्यास
काठमाडौं भाद्र १९, उत्तर कोरियाले गरेको छैठौं आणवीक परीक्षणको प्रतिक्रियास्वरुप दक्षिण कोरियाले क्षेप्यास्त्र अभ्यास गरेको छ । उत्तर कोरियाको परमाणु स्थलमा आक्रमण गरेको सांकेतिक अभ्यास गरिएको हो । दक्षिण कोरियाले लडाकु जेट बिमानबाट रकेट प्रहार गर्नुका साथै जमिनबाट ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरि अभ्यास गरेको हो । अमेरिकाले/उत्तर कोरियाल...
होसियार! इन्टरनेटमा भाइरल बन्दैछ आत्महत्या गराउने खतरनाक गेम
भाद्र १९ २०७४ एजेन्सी
एजेन्सी | भदौ १९, भारतको मध्यप्रदेशमा एक किशोरले रेलको ट्र्याकमा आत्महत्या गरे। ११ कक्षामा अध्ययनरत सात्विक पाण्डे नामका ती किशोर रेलको ट्र्याकमा घुँडा टेकेर बसेका थिए। तीव्र गतिमा आएको रेलले उनको शरीर टुक्राटुक्रा पारिदियो। सिसीटिभीमा कैद भएको यो घटना शनिबार रातिको हो। सात्विक बुबाआमाको एक्लो छोरा थिए। अभिभावकले उनलाई कुनै कुराको कमी हुन ...
नागासाकीमा खसालिएको बमभन्दा शक्तिशाली उत्तर कोरियाली ‘हाइड्रोजन बम’
भाद्र १८ २०७४ एजेन्सी
प्योङयाङ,भदौ १८ । उत्तर कोरियाले लामो दुरीको क्षेप्यास्त्रमा राख्न सकिने परमाणु हतियारको सफल परिक्षण गरेको दाबी गरेको छ । भूगर्भविद्हरुले उत्तर कोरियामा भूकम्प मापन गरेको केही घण्टापछि प्योङयाङले आफ्नो छैटौँ परमाणु परिक्षण ‘पूर्ण सफल’ भएको जनाएको हो । प्योङयाङले आफूहरुले हाइड्रोजन बम परिक्षण गरेको बताएको छ । यो परमाणु बमभन्दा कयौँ गुणा शक्...
उत्तर कोरियामा भुइँचालोः छैटौं परमाणु परिक्षणको नतिजा !
बीबीसी भदौ १८ उत्तर कोरियामा एउटा ठूलो भूकम्पको झ्टका मापन गरिएको छ । उत्तर कोरियाले आफ्नो छैटौं परमाणु परिक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी भूगर्भविद्का अनुसार ६.३ तिब्रताको उक्त भूकम्प कुनै परमाणु परिक्षणपश्चातको हो । जुन इलाकामा भूकम्प मापन गरिएको छ त्यहाँ उत्तर कोरियाले पहिले नै परमाणु परिक्षण गरिसकेको छ । घटना हुनु केही घण्टा अघि...
अगस्तमा अमेरिकी बेरोजगार दरमा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि
वासिङ्टन, भदौ १७ । अमेरिकी रोजगार दरमा अघिल्लो महिनाको तुलनामा अगस्तमा ४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अगस्तमा मात्रै एक लाख ५६ हजार अमेरिकीले रोजगारीका थप अवसर पाएका तर यो अघिल्ला बर्षको तुलनामा सन्तोषजनक नभएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्रमा नौ बर्ष पहिले देखिएको आर्थिक मन्दीबाट क्रमश सुधार आएको पाइएपनि अपेक्षाकृत सुधार देख...
बन्ने भो ट्रम्पको पर्खाल, नमूना पर्खाल बनाउन ४ कम्पनी छनौट
भाद्र १६ २०७४ एजेन्सी
न्युयोर्क ,भदौ १६। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजना अनुसार अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माण गर्न चारवटा कम्पनीलाई नमूना पर्खाल निर्माण गर्न छनौट गरिएको छ । अमेरिकी कस्टम तथा सीमा सुरक्षा (सिबिपी)ले यसबारे जानकारी दिएको हो । चारवटा कङ्क्रिट नमूना ३० फिट लामो र ३० फिट अग्लो हुने र अगामी महिनाभित्र निर्माण हुने बताइएको छ । निर्...
तत्काललाई टर्‍यो भारत चीन युद्ध
भाद्र १२ २०७४ बीबीसी
बीबीसी भदौ १२ । भारत र चीनबिच पछिल्ला केही महिनादेखि चलिरहेको डोकलाममाथि चलिरहेको विवादको हल गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सहमती बनेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार दुबै देश डोकलामबाट सेना हटाउन तयार भएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गर्दै भन्यो, ‘गत हप्तादेखि डोकलामको विषयमा भारत र चीनले कूटनीतिक कुराकानी जारी राखेका छन् ...
राम रहिमको अधिकारीलाई धम्कीः महिलासँग बस्न देउ, नभए सस्पेन्ड गरिदिन्छु
भाद्र १२ २०७४ एजेन्सी
भदौ १२ । सिबिआई कोर्टमा अगस्ट २५ तारिखमा बलात्कारी पुष्टि भएपछि जेलमा पनि गुरमित राम रहिम सिंहको मनोवृत्ति परिवर्तन भएको छैन । पुलिसले उनकी धर्मपुत्री हनिप्रितलाई हेलिकोप्टरमार्फत उनलाई रोहतक जेल लगेको थियो किनभने पंचकूला सिबिआई कोर्टमा नै राम रहिमले निवेदन दर्ता गरेर बिरामी भएको कुरा बताएका थिए । हनिप्रितले पनि वकिलमार्फत भनेकी थिइन् – उनी जेल...
तेस्रो लिङ्गीलाई फौजमा नलिन ट्रम्पको आदेश
भाद्र १० २०७४ बीबीसी
भदौ १० । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले देशको सशस्त्र फौजमा तेस्रो लिङ्गीहरुको भर्ती रोक्न रक्षा मन्त्रालयलाई आदेश दिएका छन्। यसअघि गत महिना अनपेक्षित रुपमा ट्रम्पले ट्वीटमार्फत प्रतिबन्धको संकेत गरेका थिए। रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसलाई पठाइएको आदेशमा गत वर्षको जुन महिनामा सैनिक सेवामा तेस्रो लिङ्गीहरुका लागि फुकुवा गरिएको प्रतिबन्ध...
भाद्र १० २०७४ एजेन्सी
नेपित। म्यानमारको पश्चिम तटीय प्रान्त रखिनेमा शुक्रबारदेखि भड्किएको हिंसामा परी ८९ जना मारिएका छन्, जसमा १२ जना सुरक्षाकर्मी पनि छन् । अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदायलाई न्याय दिलाउने बताउँदै सशस्त्र गतिविधि गरिरहेको समूहले हिंसा भड्काएको हो । हिंसाका कारण उक्त प्रान्तमा बसोबास गर्ने रोहिंग्या समुदायको ठूलो संख्या बंगलादेशतर्फ भाग्न थालेको छ । ...
राम रहीमका समर्थक भडि्कए, हरियाणा हिंसामा २३ को मृत्यु
भाद्र १० २०७४ ekhabarnepal
काठमाडौं,भदौ ९ । भारतको एक अदालतले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीमलाई बलात्कारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि भड्किएको हिंसामा २३ जनाको मृत्यु भएको छ । केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अनुसार हरियाणामा २३ जनको मृत्यु भएको हो । थुप्रै मानिस घाइते भएका छन् । पञ्जाब र हरियाणाका थुप्रै स्थानमा राम रहीमका समर्थक र प्रहरीबीच झडप भएको छ । ...
चीनको चेतावनी : हाम्रो सेना भारत पस्यो भने उथलपुथल मच्चिन्छ
भाद्र ७ २०७४ एजेन्सी
भदौ ७ । चीन र भुटानको सीमा क्षेत्र डोकलाममा रहेका सेना नहटाएको भन्दै भारतसँग असन्तुष्ट देखिएको चीनले फेरि चेतावनी दिएको छ। मंगलबार चीनले भारतलाई चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘हाम्रो सेना भारत घुस्यो भने उथलपुथल मच्चन्छ।’ चीनको विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘यदी हामीले पनि भारतले जस्तै सीमानामा बनेका पूर्वाधार बेइजिङका ...
त्यो जहाज जसले तहसनहस पार्यो हिरोसिमा, ७२ वर्षपछि भेटियो यस्तो हालतमा
भाद्र ६ २०७४ एजेन्सी
बीबीसी भदौ ६ दोस्रोविश्वयुद्धको क्रममा जापानी पनडुब्बीका कारण डुबेको जहाज यूएसएस इन्डियानापोलिसलाई ७२ वर्षपछि प्रशान्त महासागरमा खोजी गरिएको छ । उक्त युद्धपोत १८ हजार फिट (५.५ किलोमिटर) मुनी सुमन्द्रको सतहमा भेटियो । इन्डियानापोलिस आफ्नो सिक्रेट मिशनबाट फर्किएका बेला नष्ट गरियो । मिशनका अनुसार उक्त परमाणु पुर्याउन गएको थियो जुन पछि हिरोश...
‘रेलको डिब्बा उछिट्टिएर मेरो घरमाथि खस्यो, जस्तो फिल्ममा देखिन्छ’
भाद्र ४ २०७४ एजेन्सी
कुलदीप मिश्रा /बीबीसी भदौ ४, भारतको खतौलीमा भएको रेल दुर्घटना यात्रीका लागिमात्र नभई ट्र्याकको वरिपरि बनाइएका केही घर र एक इन्टरकलेजका लागि पनि समस्या बन्यो । कलिंग–उत्कल एक्सप्रेसको एस–५ डिब्बा निकै टाढासम्म उछिट्टिएर एक इन्टरकलेज र थुप्रै घर बज्रिन पुग्यो । इन्टरकलेजमा त्यति धेरै क्षतीको खबर आएको छैन तर पिन्टु चौधरी नामका एक किसानको घरमा ...
१० वर्षकी बलात्कृत बालिकाले छोरीलाई जन्म दिइन्
गुजरात ,भदौ २। बलात्कारपछि गर्भवति बनेकी १० वर्षीया बालिकाले छोरीलाई जन्मलाई दिएकी छिन् । गत महिना सर्वोच्च अदालतले ती बालिकाका मातापिताले गर्भपतन गर्नका लागि दिएको याचिना खारेज गरेको थियो । २.५ केजी तौल भएको शिशुको जन्म सिजेरिज सेक्सनबाट चन्दीगढस्थित अस्पतालमा भएको बताइएको छ । तर, बालिकालाई अझै पनि उनले छोरीलाई जन्म दिएको कुरा बताइएको छैन...
अब कतार र बहराइनबिच नयाँ संकट
भाद्र १ २०७४ बीबीसी
बीबीसी भदौ १ बहराइनको सरकारी टेलिभिजन च्यानलले कतारमाथि सरकार विरोधी षड्यन्त्रमा समावेश भएको आरोप लगाएको छ । यद्यपी, यो मामला सन् २०११ को हो । बहराइनले सरकार विपक्षी गुटसँग मिलेर कतारको उक्त षड्यन्त्रमाथि सहमती जनाएको आरोप लगाएको छ । सरकारी टेलिभिजन च्यानले उक्त कथित टेलिफोन रेकर्ड पनि जारी गरेको छ जसमा कतारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हमाद...
ओबामाको एक ट्वीटले रच्यो इतिहास
साउन ३२ २०७४ एजेन्सी
साउन ३२ । यो हुनसक्छ कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि यो सञ्चारको साधन हुनसक्छ । तर ट्वीटरको इतिहासमा पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको एउटा ट्वीट सबैभन्दा धेरै मन पराइएको हो । ओबामाले नेल्सन मण्डेलाको तीन बक्तव्यको शेयर गरे र साथमा एउटा फोटो अपडेट गरे । जसमा एउटा डे-केयर सेन्टरको झ्यालबाट हेरिरहेका बच्चालाई हेरेर मुस्कुराइरहेका थिए । ती ...
युद्धको डरले उत्तर कोरियाका छिमेकी देश त्रसित, यस्ता टिप्पणी दिँदै
साउन २८ २०७४ बीबीसी
साउन २८ । अमेरिका र उत्तर कोरियाबिच बढिरहेको तनावले क्षेत्रको मिडियामा दुई प्रश्न उब्जाएका छन् । पहिलो प्रश्न – के युद्ध होला ? र दोस्रोमा – के गर्नुपर्ला ? चीनमा सशस्त्र संघर्षको सम्भावनाको विषयमा आशंका गरिँदै छ । सरकारी पत्रिका चाइना डेलीले बिहिबार उत्तर कोरियाको धम्कीलाई हल्का रुपमा लिन नहुने बताएको छ । पत्रिकामा यस्तो संघर्षलाई कसरी रो...
साउन २७ २०७४ बीबीसी
साउन २७, उत्तर कोरियाले बुधबार प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी द्वीप गुआममाथि हमला गर्ने धम्की दिएको थियो । पछिल्ला दुई दिनदेखि यी दुई देशबिच तनाव निकै बढेको छ । दुबै देशको तर्फबाट उक्साउने किसिमको बयान आइरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मंगलबार यदि उत्तर कोरियाले आक्रामक व्यवहार देखाउन छोडेन भने उसले यस्तो हमलाको सामना गर्नुपर्ने हुन...
एउटा ‘डान्स स्टेप’ मा साउदी गायक पक्राउ, निम्तियो बहस
बीबीसी साउदी अरबका चर्चित गायकले कन्सर्टमा डान्स गर्ने क्रममा गरेको एउटा स्टेपका कारण पक्राउ गरिएको छ । उक्त डान्स स्टेपलाई ‘ड्याबिङ’ भनिन्छ जसमा कुहिना मोडेर त्यसमाथि आफ्नो टाउको झुकाइने गरिन्छ । टेलिभिजन प्रस्तोता, अभिनेता र गायक अब्दुल्लाह अल शाहानी तेफ शहरमा एक म्यूजिक फेस्टिबलमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए । साउदीमा ड्याबिङ गर्न प्रति...
उत्तर कोरिया प्रतिबन्धको चोट सहन नसकेपछि अमेरिकी द्वीपमाथि हमलाको तयारीमा, स्थिती नाजुक
साउन २५ २०७४ एजेन्सी
उत्तर कोरियाले अमेरिकी प्यासिफिक क्षेत्रको द्वीप गुआममा परमाणु हमलाको तयारी गरिरहेको बताएको छ । गुआम पश्चिमी प्रशान्त महासागरको एक अमेरिकी द्वीप हो । उक्त खबर उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाबाट सार्वजनिक भएको हो । उत्तर कोरियाको सरकारी मिडियाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई धम्की दिएको केही घण्टापछि एक सैन्य बयान जारी गरेको हो । उत्तर क...
चीनमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा १०० जनाको मृत्यु भएको आशंका, १७५ जना घाइते
बेइजिङ । चीनको सिचुवान प्रान्तमा गएको ७.० म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा परी कम्तीमा १०० जनाको मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । अहिलेसम्म १३ जनाको मृत्यु भएको निश्चित भएको सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीले जनाएको छ । भूकम्पमा परी १७५ जना घाइते भएको पनि सिन्ह्वाले बताएको छ । चिनियाँ भूकम्प मापन केन्द्र सिइएनसीले जनाए अनुसार स्थानीय समय अनुसार मङ्...
१० वर्षमा गर्भवती बनेकी बालिकाको कथा
साउन २४ २०७४ बीबीसी
साउन २४। गीता पाण्डेय १० वर्षको उमेरमा गर्भवती बनेकी बालिका उनको विषयलाई लिएर बाहिर के कस्तो हंगामा मच्चिरहेको छ भन्ने बारेमा अनजान छिन् । ती बलिकालाई यो पनि थाहा छैन कि उनलाई के समस्या छ । जब हामी चन्दीगढ पुगेर उनको कथा जान्ने प्रयास गर्यौँ, उनी निकै हँसिली बालिका रहेको पायौँ । कसैले बोलायो भने उनी तुरुन्त मुस्कुराई हाल्थिन् । साथै, उनी ...
भारतीय व्यापारी मुकेश अम्बानी यसरी भए एसियाको दोस्रो धनी
साउन २४ २०७४ .
काठमाडौं, साउन २४–भारतीय व्यापारी मुकेश अम्बानी एसियाकै दोस्रो धनी भएका छन् । उनको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले हालै सार्वजनिक गरेको फोरजी फिचर सहितको जियो फोनले नै उनलाई पुनः एसियाको दोस्रो धनीमा रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । विदेशी सञ्चार माध्यमका अनुसार केही समय अघि मात्र सार्वजनिक भएको जियोको फोजी स्मार्ट फोनले रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको पनि विश्...
अब धेरै कुर्दैनौं, चेतावनीलाई उपेक्षा गरिरहे भारतसँग युद्ध निश्चित छ : चीन
साउन २४ २०७४ एजेन्सी
एजेन्सी । पछिल्लो डेढ महिनादेखिको जारी सीमा विवाद नरोकिएपछि चीनले भारतलाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । अहिले चीन यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि भारतले १९६२ को युद्धबाट केही पनि सिकेको रहेनछ । चीनको ग्लोबल टाईम्सले सम्पादकीयमा लेखेको विषयलाई लिएर भारतको टाईम्स अफ इन्डियाले लेखेको एउटा रिपोर्टमा भनिएको छ कि ‘अहिले विज्ञहरु यी दुई मुलुकबीच युद्ध हुने सम...
के दक्षिण एशियाबारे ‘ट्रम्प कार्ड’को गोटी बन्दै छ भारत ?
साउन २३। नयाँदिल्ली । मनिलामा आसियान सदस्य देशका विदेश मन्त्रीहरुको बैठकका क्रममा भारतका विदेश राज्यमन्त्री वीके सिंह तथा अमेरिकी विदेश मन्त्री रेक्स टिलरसनबीच भेटघाट भयो । यस भेटघाटले भारत तथा अमेरिकाको प्रगाढ हुँदै आएको सम्बन्धलाई अझ मजवूत बनाउने काम गरेको छ । उनीहरुबीचको भेट यस्तो समयमा भएको थियो कि नयाँ ट्रम्प प्रशासन अफगानिस्तानमा चलि...
उत्तर कोरियामाथि राष्ट्रसंघको थप प्रतिबन्ध, क्षेप्यास्त्र परीक्षण तत्काल बन्द गर : चीन
एजेन्सी, मनिला | उत्तर कोरियालाई आणविक परीक्षण तत्काल रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नउक्साउन चीनले आग्रह गरेको छ । उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले ताजा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले उत्तर कोरियाका समकक्षी री योङ होलाई फिलिपिन्समा सो आग्रह गरेका हुन् । आइतबार मनिलामा भएको भेटवार्तामा विदेशमन्त्री यी...
डोकलाम विवाद : दुई छिमेकीको आँखा अब नेपालमा
साउन २२ २०७४ एजेन्सी
एजेन्सी, साउन २२। डोकलाम क्षेत्रमा भारत र चीनबीच देखिएको सीमा विवाद लम्बिँदै जाँदा दुई छिमेकी मुलुकले नेपालमा कुटनीतिक लबिङ शुरु गरेका छन् । एक अर्कालाई ‘काउन्टर’ दिनका लागि पछिल्लो समय नेपालमा दुवै देशका कुटनीतिक प्रतिनिधिहरु सक्रिय देखिएका छन् । विशेष गरेर चीनले नेपालसँग डोकलाम विवादको विषयमा छलफल गर्ने बताएपछि भारत सशंकित बनेको छ । विवादीत...
भारतलाई युद्धतर्फ धकेलिरहेको छ मोदी सरकार, नतिजा जगजाहिरः चीनियाँ पत्रिका
साउन २१ २०७४ एजेन्सी
साउन २१, डोकलाम विवादका बिच चीनले एकपटक पुनः मोदी सरकारमाथि निशाना साँधेको छ । सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले मोदी सरकारले भारतलाई लडाईंका लागि धकेलिरहेको बताएको छ । पत्रिकाले युद्ध हुने स्थितीको नतिजा जगजाहिर भएको पनि लेखेको छ । चीनियाँ पत्रिकाले डोकलाममा भारतीय सेना पछि नहटे युद्ध तय भएको र युद्ध हुँदाको नतिजा जगजाहिर भएको लेखेको छ । चीनिय...
दोक्लामलाई अघि सार्दै भारतले थाल्यो चीनसँग ‘बार्गेनिङ’
साउन २० २०७४ .
साउन २० – भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले दोक्लाम विवादको समाधान युद्ध हुन नसक्ने भन्दै संयमतापुर्वक वार्ताबाट समाधान खोज्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले दोक्लाममात्र नभएर समग्रमा चीन–भारतविचमा विवादित भएका महत्वपुर्ण मुद्दामा समग्रमा सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको छ । भारतीय माथिल्लो सदन राज्यसभामा बिहिबार दोक्ला...
धर्तीलाई एलियनबाट बचाउनका लागि नासामा जागिर खुल्योः तलब लगभग २ करोड
साउन १९, तपाईंले कहिले आफूलाई धर्ती बचाउने हिरोको रुपमा हेर्नुभएको छ वा महसुस गर्नुभएको छ, यदि त्यस्तो छैन भने नासाले तपाईंका लागि ‘हिरो’ बन्ने अवसर लिएर आएको छ । आजकाल नासा अर्को ग्रहमा जीवनको खोजीमा नभई यस्ता व्यक्तिको खोजीमा छ जसले धर्तीलाई एलियनबाट सुरक्षा दिन सकोस् र यसका लागि तलब हुनेछ एक करोड बढी । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले ‘...
यमनमा भएका छुट्टाछुट्टै भिडन्तमा २७ सैनिक र १६ विद्रोहीको मृत्यु
साउन १५ २०७४ एजेन्सी
यमन । यमनी सेना र यहाँ रहेका सशस्त्र विद्रोहीका बीचमा गत बिहीबार र आइतबार बिहान भएका भिडन्तमा परी सैनिक र विद्रोहीगरी ४३ जनाको मृत्यु भएको समाचार छ । इरानसँग नजिक पर्ने मोखाको रेड सि बन्दरगाह नगरमा भएको भिडन्तमा उनीहरु मारिएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी अर्काे एक समाचारअनुसार मोखाको पूर्बी भागमा गएराति रातभर भएको भिडन्तमा पर...
सैन्य ड्रेसमा चीनका राष्ट्रपतिले भने, ‘युद्धका लागि तयार होउ’
रोयटर्स डोकलाममा जारी तनावबिच चीनियाँ सेनाले आइतबार शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । जनमुक्ति सेनाको स्थापना भएको ९० वर्ष पूरा भएको मौकामा सुदूर उत्तरी चीनस्थित एक सैन्य बेसमा निकै ठूलो मिलिटरी परेड निकालियो । यसमा नयाँ एड्भान्स फाइटर जेट्सदेखि चीनियाँ सैन्य समूहले भाग लियो । राष्ट्रपति शी जिनपिंग पनि यो कार्यक्रममा उपस्थित थिए । उनले चीनियाँ सेनालाई...
शरीफको भाग्य : ससुराले बहाल गरे, ज्वाइँले अयोग्य बनाइदिए
साउन १५, शहजाद मलिक पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको कोठा नम्बर एकको दृश्य २४ वर्षअघि सन् १९९३ भन्दा निकै फरक थियो । चौबिस सालअघि जब तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको सरकार बहाल गर्न सर्वोच्च न्यायालयको बेञ्चको बैठक बसेको थियो, त्यतिबेलाका प्रमुख न्यायाधीस नसीम हसन शाहले प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिमण्डललाई बहाल गरेका थिए । प्रधानमन्त्...
श्रीमतीले हाँसो रोक्न नसकेपछि श्रीमानले गरिदिए हत्या
साउन १४ २०७४ बीबीसी
साउन १४,। अमेरिकाको अलास्कामा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हाँसोबाट रिस उठेका कारण क्रुज शिपमा उनको हत्या गरेको बताइएको छ । केनेथ मन्जानारेस नामका एक व्यक्तिमाथि आफ्नी ३९ वर्षीया श्रीमतीको हत्याको आरोप लागेको छ । उनको शव क्याबिनमा भेटिएको थियो र टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो । अदालतमा पेश गरिएको कागजपत्रका अनुसार केनेथको हात र कपडामा रगत देखिएपछ...
बिल गेट्सलाई पछि पार्दै यी व्यक्ति बने संसारकै सबैभन्दा धनी, थाहा पाउनुस् को हुन् उनी
साउन १३ २०७४ .
साउन १३ । माइक्रोसफ्टका मालिक बिल गेट्स अब संसारकै धनी व्यक्तिको सूचीबाट बाहिरिएका छन् । उनको स्थान ओगटेका छन् इ–कमर्स रिटेल कम्पनी अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस । फोर्ब्सको ताजा रिपोर्ट अनुसार बेजोसँग यतिबेला ९०.६ अर्ब डलरको सम्पत्ति छ जबकी गेट्सको सम्पत्ति ९० अर्ब डलर छ । उनको कम्पनीको सेयरको मूल्यमा भएको बढोत्तरीका कारण बेजोसको सम्पत्ति पनि ए...
साउन १२ २०७४ एजेन्सी
काठमाडौं, साउन १२– पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले भारतले द्विपक्षीय मुद्दाको छायाँमा दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) लाई असफल पार्ने प्रयास गरेको बताउनुभएको छ । मालदिभ्सको राजधानी मालेमा समकक्षी अब्दुल्ला यमिन अब्दुल गैयुमसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री सरिफले भारतीय भूमिकाकै कारण सार्क कमजोर भएको बताउनुभएको हो...
मुम्बईमा घटनाः मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुग्यो
साउन ११ २०७४ एजेन्सी
मुम्बई साउन,११ । भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा मङ्गलबार एक पाँच तले भवन भत्किँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुगेको छ । घटनामा ३० जनाभन्दा बढी अन्य व्यक्ति फसेको बताइएको छ । उनीहरूको उद्दारका लागि आवश्यक प्रयास जारी राखिएको छ । यस घटनाबाट यस पहिले एघार जनालाई उद्धार गरिएको छ । अग्नी नियन्त्रक कार्यायलका एक अधिकारी पि रहाङदेलका अनुसार यस घटन...
साउन १० २०७४ एजेन्सी
साउन १० भारतमा आज रामनाथ कोबिन्दले देशको १४ औं राष्ट्रपतिको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका छन् । यसै अवसरमा आज हामी तपाईंलाई भारतीय राष्ट्रपतिको तलब र उनले पाउने सेवा सुविधाबारे जानकारी दिँदै छौं । तलबः भारतीय राष्ट्रपतिलाई मासिक १ लाख ५० हजार भारु तलब दिइन्छ । यसलाई पाँच लाख भारुमा बढाउनु पर्ने माग गरिएता पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट स्विकृृती प...
के चीनलाई बुझ्न गल्ती गरिरहेको छ भारत ?
साउन १० २०७४ बीबीसी
साउन १०, भारत र चीनबिच डोकलाम सीमामा पछिल्लो पाँच हप्तादेखि तनाव जारी छ । संसारभरीका विश्लेषकले यो गतिरोधबाट युद्धको आशंका गहिरिएको बताउँदै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । आइतबार द चारहार इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता र चाइना वेस्ट नर्मल युनिभर्सिटीमा सेन्टर फर इन्डियन स्टडिजका निर्देशक लोंग शिन्चुनको चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा भारत–च...
कतार सङ्कट हलगर्न युरोपेली युनियनका उच्च अधिकारी र टर्कीका राष्ट्रपति गल्फमा
साउन ९ २०७४ एजेन्सी
कुवेत,साउन ९ । कतारलाई उसका छिमेकी तथा गल्फ राष्ट्रहरुले लगाएको नाकाबन्दीपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि कुवेतले पछिल्लो समयमा सक्रियता देखाएको छ । सो प्रयासस्वरुप कुवेतका विदेशमन्त्री सवाह खालिद अल सबाहले युरोपेली युनियनका विदेश मामिला सम्बन्धी प्रमुख फेडरिका मागरिनीसँग भेटवार्ता गरेको समाचारमा जनाइएको छ । उनले पछिल्लो समयमा कतारमा जारी...
साउन ८ २०७४ एजेन्सी
साउन ८, इन्डोनेसियाका लागुऔषध कारोबारीलाई पुलिसले सिधै गोली हान्ने सम्भावना वृद्धि भएको छ । लागुऔषधको समस्यासँग जुध्नका लागि राष्ट्रपति जोको विडोडोले कानून प्रवर्तन अधिकारीहरुलाई लागुऔषध तस्करलाई गोली हान्ने निर्देशन दिएका छन् । यो निर्णयको तुलना फिलिन्सिका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेतेको ड्रगवारसँग भइरहेको छ । विडोडोले शनिबार अधिकारीलाई भन...
भारतीय सेनाको वास्तविकताः सुरक्षाको साधन छैन तर भन्छ, ‘स्थिती त्यति कमजोर छैन जति बताइएको छ’
साउन ८ २०७४ बीबीसी
साउन ८, भारत र चीनबिच सिक्किम नजिकैको डोकलाम क्षेत्रमा तनाव जारी छ । हिन्दी पत्रिका दैनिक भास्करको एक खबर अनुसार भारतीय संसदमा पेश भएको नियन्त्रक एवं महालेखा परिक्षक (क्याग) को एक रिपोर्टले बताए अनुसार यदि युद्ध सुरु भए भारतीय सेनाद्वारा प्रयोग गरिने गोली–बारुदमध्येको ४० प्रतिशत १० दिनमै समाप्त हुन्छ । भारतीय मिडियामा आइरहेको रिपोर्ट अन...
युद्ध सुरु भए भारतसँग भएको गोली–बारुद १० दिनमै समाप्त हुने
साउन ७ २०७४ एजेन्सी
साउन ७, भारतीय संसदमा पेश भएको नियन्त्रक एवं महालेखा परिक्षक (क्याग) को एक रिपोर्ट अनुसार यदि युद्ध सुरु भए भारतीय सेनाद्वार प्रयोग गर्ने गोली–बारुदमध्ये ४० प्रतिशत १० दिन भित्रै समाप्त हुनेछ । दैनिक भाष्करले एक रिपोर्टमार्फत सो कुराको जानकारी दिएको हो । रिपोर्ट अनुसार युद्ध सुरु भएको स्थितीमा ७० प्रतिशत ट्याङ्क र तोपको ४४ प्रतिशत गोली बारुद...
नाकाबन्दीपछि पहिलो पटक बोले कतारका अमिर
कतार साउन ७। कतारका अमीरले खाडी चार छिमेकी देशसँग विवादलाई वार्ता र संवादबाट हल गर्न आव्हान गरेका छन् । साउदी अरव, मिश्र, बहराइन र संयुक्त अरव इमिरेटका तर्फबाट आर्थिक नाकाबन्दीपछि कतारका अमीर तमीम बिन हमद अल थानीको यो पहिलो बयान हो । साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले कतारले चरमपन्थी समूहको समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै कतारसँगको सम्बन...
भारतलाई चिनियाँ मिडियाको अर्को चेतावनी– पिएलए चीनका जनता तल झरेको देख्न चाहदैन
बेइजिङ\_दिल्ली साउन ७, – चीनको सरकारी मिडियाले भनेको छ कि, ‘चीन आफ्नो जमिनको एक इन्च पनि छाड्न सक्दैन ।’ यो भनाईसँगै चीनले सिक्किम सेक्टरको डोकलाम क्षेत्रबाट पीपुल्स लिवरेशन आर्मीको टुकडीको फिर्ता नबलाउने संकेत दिएको छ । पछिल्लो ३७ दिनदेखि डोकलाममा भारत र चीनका सैनिक टुकडी आमने–सामने छन् । चीनले यहाँ सडक बनाउन खोजेको छ । भारत र भुटान यसको विरोधमा...
अमेरिकाको एक निर्णयले पाकिस्तानलाई भयो ठूलो झड्का
पाकिस्तान साउन ७ -अमेरिकारले एक पटक फेरि पाकिस्तानलाई अडा सन्देश दिएको छ । अमेरिकाको सरकारले शुक्रवार राती पाकिस्तानलाई दिने ३५० मिलियन डलर को सहयोग रोकेको छ । नेपाली समय अनुसार राती सवा ९ बजेति अमेरिकाले यो निणर््य लिएको हो । यसो घोषणा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका प्रवत्ताले गर्छन । अमेरिकाको आरोप छ कि, पाकिस्तानले आंतकवादी कारवाहीको जरुरी कदम लिए...